Ekwentị Huawei nwere Kirin 990 apụtawo na Geekbench | Gam akporosis
Edere ekwentị Huawei dị omimi na Kirin 990 ọhụrụ na Geekbench
El Kirin 990 Ọ bụ Huawei ọhụrụ arụmọrụ dị elu. Ndị ụlọ ọrụ China wepụtara ya n’ihu IFA nke afọ a, nke kwụsịrị ụbọchị ole na ole gara aga.
Geekbench were ya iji mee ụfọdụ ule ma jiri ọnụ ya mee ihe site na iji ọnụ amaghị ama. Amaghị ihe ekwentị a ga-akpọ, mana ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ọkọlọtọ ndị ọzọ ọ na-akwadebe maka afọ a. Iji mee ka ihe doo anya ma bụrụ ihe doro anya na ihe nyocha ule debanyere aha na nchekwa data ya na ekwentị a, anyị biputere ndepụta dị n'okpuru ebe a ...
El Huawei NLE-AL00 Ihe eji eme ya bu ihe eji eme HiSilicon nke nwere ihe gbadara 1.96 GHz na ihe omume IFA 2019 mere na Berlin, Germany, Huawei kwuputala Kirin 990 na Kirin 990 5G chipsets. Mbipụta 5G nwere Cortex-A76 abụọ dị na 2.86 GHz, abụọ Cortex-A76 cores na-arụ ọrụ na 2.36 GHz, na isi Cortex-A55 anọ na-agba ọsọ na 1.95 GHz. N'aka nke ọzọ, ụdị nke chipset mgbe niile nwere Cortex abụọ- A76 cores na elekere ugboro 2.86 GHz, a na-ahazi Cortex-A76 cores abụọ na 2.09 GHz na isi anọ Cortex-A55 na 1.86 GHz. -00G nke Kirin 5.
Huawei NLE-AL00 na Kirin 990 na Geekbench
Ngwaọrụ a nwere ike ịbụ ekwentị flagship na-abịa ka ọ na-agba ọsọ na sistemụ ekwuputala na nso nso a. gam akporo 10. Ejiri Kirin 990 chipset ekwere na 8 GB nke RAM na-enyere aka, dị ka a pụrụ ịhụ na ndepụta ahụ. Na Geekbench's single-core test, NLE-AL00 nwetara akara 3,842, ebe o dekọtara ihe 11,644 na nyocha ọtụtụ. Ekpebeghi ya ma “NLE-AL00” bu ama ama ama ama ama Huawei ma obu Honor.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Edere ekwentị Huawei dị omimi na Kirin 990 ọhụrụ na Geekbench
Realme na-ebelata kalenda nke mmelite na gam akporo 10
Oge 9 nke ọwụwa anyanwụ na-abịa PUBG Mobile na ndị dike jikọtara ọnụ!